Shina Fampiasana manokana ny milina fandefasana jiro am-paosy amin'ny ozinina sy mpamokatra | Qiangdi
Mampiasà fitaovana manokana amin'ny faritra misy ny vokatra mifandraika mba hanomezana fahafaham-po ny fitakiana fitadiavana vokatra mafy.
● Kodiarana fanaingoana keramika na SiO na Carborundum hifanaraka amin'ny vokatra henjana samihafa izay ambony noho ny vy ny hamafiny.
● Mametaka takelaka vita amin'ny seramika eo amin'ny rindrin'ny mill mill Jet.
● Mametaka pu na seramika ho an'ny Separator Separator sy mpanangona vovoka.
Ny rafitra fikosoham-bary jet dia misy mill mill, cyclone, sivana kitapo ary drafitra mpankafy. Ny rivotra voasivana, voafafa ary voafintina dia aondraka ao amin'ny efitranon'ny fikosoham-bary amin'ny alàlan'ny tsimok'aretin'ny rivotra, mifampikasoka ny fitaovana amin'ny fiarahan'ny fikorianan'ny rivotra jet misy tsindry efatra ary farany potipotika. Avy eo, ny fitaovana dia ho sokajiana amin'ny habe samihafa eo ambanin'ny hery centrifugal sy ny hery centripetal. Ny sombin-tsarimihetsika mahafeno fepetra dia angonin'ny sivana siklone sy kitapo, ary ny sombin-javatra be loatra kosa haverina amin'ny efitrano fikosoham-bary.
Naoty: Ny fanjifana rivotra avy any 2 m3 / min hatramin'ny 40 m3 / min. Ny fahaizan'ny famokarana dia miankina amin'ny tarehintsoratra manokana momba ny fitaovanao, ary azo sedraina amin'ny tobin'ny fitsapana ataonay. Ny angon-drakitra momba ny fahaizan'ny famokarana sy ny fahamendrehan'ny vokatra ao amin'ity takelaka ity dia ho anao fotsiny. Ny fitaovana samihafa dia samy manana ny mampiavaka azy, ary avy eo ny maodelin'ny fikosoham-bovoka dia hanome fahombiazana amin'ny famokarana samihafa ho an'ny fitaovana samihafa. Azafady mba mifandraisa amiko raha misy tolo-kevitra na fanandramana teknika namboarina miaraka amin'ny fitaovanao.
1.Parecision vita amin'ny seramika vita amin'ny rindrina, fanamainana miady amin'ny akanjo azo ovaina avy amin'ny dingan'ny fanasokajiana ara-materialy hanomezana toky ny fahadiovan'ny vokatra. Mety indrindra ho an'ny vokatra avo henjana, toy ny WC, SiC, SiN, SiO2 sy ny sisa.
3.Fahombiazana: ligne ceramic na SiO na Carborundum ampiharina amin'ny fitaovana misy Mohs Hardness Kilasy 5 ~ 9. ny vokatra fikosoham-bary dia tsy misy afa-tsy ny fiatraikany sy ny fifandonana amin'ireo voamaina fa tsy ny fifandonana amin'ny rindrina. miantoka ny tsy fifandraisana amin'ny vy mandritra ny fitotoana fahadiovana ho an'ny farany.
4. Ny hafainganam-pandehan'ny kodiarana dia fehezin'ny mpanova, ny haben'ny sombiny dia azo ovaina malalaka. Ny kodiarana manasokajy dia manasaraka ny fitaovana mandeha ho azy miaraka amin'ny airflow mba hifehezana tsara ny fahamendrehan'ny vokatra vita. Ny vokatra vovoka Powtrafine dia azo antoka sy azo antoka.
Serivisy ho an'ny tetikasa
- Fampivoarana ny lozisialy sy fandefasana fampiharana amin'ny fotoana tena izy
- Famokarana milina
- Fametrahana sy fitsapana ny rafitra fikirakirana sy fanaraha-maso
- Kaomisiona momba ny milina sy ny zavamaniry
- Fahafahana sy fandalinana hevitra
- Fandaharam-potoana sy drafitra ho an'ny loharano
- Vahaolana turnkey, fanavaozana ny zavamaniry ary vahaolana maoderina
- Fampiasana ny fahalalana azo avy amina fampiharana an-jatony manerana ny indostria rehetra
- Manararaotra fahaizana avy amin'ireo injeniera sy mpiara-miasa efa za-draharaha aminay
Teo aloha: Karazan'olona malaza Jet Mill-bed am-pandriana
Manaraka: Fitaovana mafy mafy Jet Mill